Uluhlu lweeTyhefu ezinxulumene neTyxicity of Chemicals
Utywala olunxulumene neKhemikhali
Le uluhlu okanye itafile yeekhemikhali ezingakubulala. Ezinye zalezi zityhefu ziqhelekile kwaye ezinye ziyingqabile. Ezinye ozidingayo ukuze uphile, kanti ezinye kufuneka uziphephe kuzo zonke iindleko. Qaphela ukuba ixabiso liyimilinganiselo ebulalayo yomntu ophakathi. Ubunobomi be-real-life buxhomekeke kubukhulu bakho, ubudala, ubulili, ubunzima, indlela yokuchithwa kunye nezinye izinto ezininzi. Olu luhlu lunikela nje ngolu hlobo kwimiba yeekhemikhali kunye nobutyhefu .
Ngokuyisisiseko, zonke iikhemikhali zinetyhefu. Kuxhomekeke kuphela kwisixa!
Le tafile ihlelwe ukususela ekufeni kwabaninzi ababulalayo:
Amachiza Dose Uhlobo Ithagethi
amanzi 8 kg engavumelekanga kwinkqubo yesantya
khokela 500 g engavumelekanga kwinkqubo yesantya
utywala 500 g eziphilayo izintso / isibindi
ketamine 226 g iziyobisi i-cardiovascular
ityuwa yetyuwa 225 g engavumelekanga kwinkqubo yesantya
ibuprofen (umzekelo, Advil) 30 g iziyobisi izintso / isibindi
caffeine 15 g biological kwinkqubo yesantya
i-paracetamol (umzekelo, iTylenol) 12 g iziyobisi izintso / isibindi
aspirin 11 g iziyobisi izintso / isibindi
amphetamine 9 g iziyobisi kwinkqubo yesantya
nicotine 3.7 g biological kwinkqubo yesantya
cocaine 3 g biological i-cardiovascular
methamphetamine 1 g iziyobisi kwinkqubo yesantya
chlorine 1 g lento i-cardiovascular
arsenic 975 mg lento inkqubo yokugaya
inyosi yokugaya inyosi 500 mg biological kwinkqubo yesantya
i-cyanide 250 mg eziphilayo kubangela ukufa kweseli
aflatoxin 180 mg biological izintso / isibindi
isifo se mamba 120 mg biological kwinkqubo yesantya
umsikazi omnyama ongumhlolokazi 70 mg biological kwinkqubo yesantya
formaldehyde 11 mg eziphilayo kubangela ukufa kweseli
ricin (ubhontshisi we-castor) 1.76 mg biological bulala iiseli
VX (igesi yegesi) 189 mcg organophosphate utyhafile
tetrodotoxin 25 mcg biological kwinkqubo yesantya
mercury 18 mcg lento kwinkqubo yesantya
botulinum (botulism) 270 ng biological utyhafile
iTetanospasmin (i-tetanus) 75 ng biological kwinkqubo yesantya
Iibhokhwe: I-Lethal vs Inetyhefu
Ukujonga uluhlu lweentlongo, unokuhendwa ukuba ucinge ukuba ukhokelo lukhuselekile kunokuba ityuwa okanye inyosi yokugaya inyosi iphephile kunokuba i-cyanide. Ukujonga i-dose ebulalayo kungakhohlisayo kuba ezinye zeekhemikhali ziyi-poison (c), ezinye ziyimichiza umzimba wakho ngokwemvelo uchithekisa ngemali encinci (umzekelo, i-cyanide).
I-biochemistry nganye ibalulekile. Nangona kungathatha isigamu segrama senyosi yokubulala umntu oqhelekileyo, i-dose ephantsi kakhulu iya kubangela ukutshatyalaliswa kwe-anaphylactic nokufa ukuba unobungozi.
Ezinye "iityhefu" ziyimfuneko ebomini, njengamanzi notyuwa. Ezinye iikhemikhali azisebenzanga umsebenzi owaziwayo we-biological kwaye zinobutyhefu, ezifana ne-lead and mercury.
Uninzi lweePoyizi eziBomi boBomi boBomi
Nangona kungenakwenzeka ukuba uya kufakwa kwi-tetradodoxin ngaphandle kokuba udla i-fugu engalunganga (isidlo esilungiselwe kwi-pufferfish), ezinye iibhokhwe zihlala zidala iingxaki. Ezi ziquka:
iilwimi zentlungu (ngaphaya kwekhayibhile okanye umrhumo)
izidakamizwa ezikhulayo kunye ne-antipsychotic
abacebisi bendlu (ngakumbi xa baxutywa )
utywala (inkozo yotywala kunye neentlobo ezingenzelwe ukusetyenziswa kwabantu)
inambuzane, i-arachnid, kunye ne-reptile venom
Indlela yokudlala iSystem Cross Craps System